Indlela yokugcina umbono wakho ngelixa usebenza kwikhompyutha?
Ayikho imfihlo yokuba ukusebenza nekhompyutheni ayinayo impembelelo entle emehlweni. Intloko, ukukhathala kunye nokukhathazeka kweso, ukuvuvukala, ubomvu, owomileyo bonke bayaqhelana nabo bachitha ixesha elide kwikompyutha. Njengoko i-ophthalmologists ithi, ukuba inani lezigulane ezingabonakaliyo ekusebenzeni kwikhomputha liyaqhubeka. Yintoni endiyenzayo? Emva koko, abaninzi bethu ngaphandle kwekhompyutheni abamele babele ubomi babo. Indlela yokugcina amehlo akho xa usebenza kwikhompyutha, sifunda kule ncwadi.
Umbutho wendawo yokusebenzela
Ukuze ugcine umboniso wakho, xa uhlela indawo yokusebenzela, kufuneka ubeke ingqalelo kwesikrini sesitrato esiphezulu kwinqanaba lemehlo. Emva koko amaqela ezihlunu zamehlo azakuphumla ngokuzenzekelayo, ezixakeke kakhulu xa zikhangele phambili kwaye ziphantsi. I-monitor yekhompyutheni ifanele ibekwe ukuze ingafumani ukukhanya okukhanyayo kwisibane okanye ngokukhanya kwelanga, ukuze kungabikho i-glare.
Umgama ukusuka kwamehlo ukuya kweso sango akufanele ube ngaphantsi kwama-centimitha angama-70, kwaye umlenze kufuneka ube ubuncinane ubuncinane obu-17 intshi. Kwaye kuya kuba mnandi ukuba umbala wesiqendu kunye neeleta kwibhodibhodi kunye neskrini akuhambisani, oko kukuthi, akudingeki ukuba uthenge iibhobhodi ezimnyama ngeencwadi ezimhlophe.
Ngaphambi kokuba uhlale phantsi kwikhompyutha, kufuneka uhlolisise ukukhanya kwendawo yokusebenzela. Umzekelo, isibane esisekhompyutheni kufuneka sihlanganiswe nesihlunu se-blue to maximize ukukhanya kwayo ekukhanyeni kwesikrini kweso. Iindonga ezijikelezileyo kweso siqulatho senziwe ngcono ngephepha lodonga oluhlaza okwesibhakabhaka okanye ipeyinti eluhlaza.
Emva kwemizuzu engama-40 yomsebenzi kwikhompyutheni, kufuneka uthathe ikhefu elifutshane. Ngokufanelekileyo, kungcono ukwenza imisebenzi yokujonga amehlo okanye ukuhamba ngekhabhinethi, okanye ukwenza i-gymnastics elula. Unokuhlala ixesha elithile, ukhululekile kwaye uvale amehlo akho.
Ubuso obuhle bunokuba yinto xa imisipha yomzimba wonke kunye nezihlunu zamehlo zikhululekile. Kwiimeko ezininzi, ukuxhatshazwa komva kuqala kwingingqi ye-lumbar, ehamba ngokugqithiseleyo entanyeni, kwaye ichaphazela ubuninzi obubonakalayo. Kulo liso, ukuxhatshazwa kwindawo yomhlathi kuyathinteka kakubi. Xa intamo namahlombe zikhululekile, i-oksijeni kunye nokuphuma kwegazi okuphazamiseka kungena kwindawo ebonakalayo yomqolo wengqondo.
Ngexesha elide yenza oku kulandelwayo kwamehlo
Vala ngokukhawuleza kwaye uvule amehlo amaninzi amaxesha angama-6 okanye ama-7, okwenza isikhewu semitha engama-30.
Makhe sibheke phezulu, phantsi, ngakwesokunene, ngakwesobunxele, asiyi kuguqula iintloko zethu.
Sitshintsha amehlo ethu kwisangqa: phansi, kunene, phezulu, ngakwesobunxele, kwaye emva koko.
Ukukhawuleza ngokukhawuleza kwimizuzu engama-1 okanye emi-2.
Sivalela iimbophe, size siwasile kunye neentshukumo zeetyhula zeminwe ngomzuzu owodwa.
Ukuzivocavoca kwenziwa kwenziwa, kwaye umsebenzo ngamnye uyenziwa 2 okanye amaxesha amathathu kwixesha eli-1 okanye 2 imizuzu. Ubungakanani bomsebenzi kufuneka ube nemizuzu eyi-10.
Phawula kwiingcamango iingongoma ezimbalwa kwindawo yokusebenzela. Qala ngento ethile esondele, umzekelo, ukusuka kwiphondo lesithupha okanye kwikhompyutheni yekhompyutha. Iphuzu elilandelayo lingasondela kwesikrini, kwisebe. Ngoku khangela ubuso bakho kwenye into ekhoyo kwidesksi, into efana ne-pencil holder, ipadamping pad, iphepha lokubhala, umlawuli, njalonjalo.
Khangela izinto ezikumgama ohlukeneyo kuwe. Gcina amehlo akho kwisifundo ngasinye. Emva koko jonga umthi, ifestile, ifreyimu yefestile, indlu ephikisana nawe, kwaye ude kwaye ude ude ukhangele ukukhanya.
Ukuphumla kwamehlo ngeentende
Indlela efanelekileyo yokuphucula amehlo akho iya kubabeka izandla zakho. Le ndlela yasungulwa ngu-oculist waseMerika uDkt. Bateson, owakha inkqubo ekhethekileyo yokukhusela izifo zeso.
Siza kuhlala etafileni size sithembele kwiindawo zethu, sithatha indawo epholileyo. Gubungula izandla uze uphumule iminwe yakho kunye nezibonda.
Masiguqule iintende zethu omnye komnye aze ade afudumele. Siza kufaka izandla zethu ngamandla kunye nokufudumala. Emva koko vala amehlo akho ngezandla zakho. Masibeke iintloko zethu ezandleni zethu size sivale amehlo ethu.
Iminwe yesandla zombini kufuneka idibanise ebunzini. Siza kuzama ukugcina izandla zethu zikhululekile, musa ukubeka uxinzelelo emehlweni ethu. Izindebe kufuneka ziphumle kwiinkophe ezinjenge-dome.
Uziva ubumnyama. Ebumnyameni kwiiseli ezibonakalayo ze-retina, kubalulekile ukuba umbono we-rhodopsin wenziwe. Ngoku amehlo abukhululekile. Ukubona ubumnyama kukuphumla kwamehlo, amehlo abuyiselwa. Siza kuziva ukuba ubumnyama bunamandla kwaye uzama ukujinisa ngakumbi.
Ukuba uziva ukhathele kakhulu kusihlwa, kufuneka ubeke kwi-chamomile okanye i-tea compresses. Kwaye unokusula amehlo akho ngecobo elicocekileyo elixutywe nge-chamomile. Unakho ukulala ebumnyameni kunye nokuthula ngokugqithiseleyo amehlo akho avaliwe imizuzu engama-30.
Ngoku siyazi indlela yokugcina amehlo akho ngelixa usebenza kwikhompyutha. Ukuba umsebenzi wakho udibene neyure edibeneyo ekhompyutheni, kufuneka uhambe rhoqo. Ukugcina amehlo akho, usebenzise, ​​udibanisa, ubeke amehlo akho, uzame ukuthatha ikhefu, ukwenzela ukuba amehlo akho angancinci.
Ukufumana amandla alahlekileyo
Iimvakalelo ezingenakuqonda kwaye zimele zilawulwe
Indlela yokususa amanqaku okutshisa esuka kwintsimbi kwiingubo
Iingcebiso eziwusizo ze-hostess home
Ukubhiyozela unyaka omtsha wedwa
Ukususwa kwamatye kwiingubo
Indlela yokwenza ikhofi yemvelo ekhaya
I-dummy ngumhlobo okanye intshaba kumntwana wakho?
Yintoni enokuyenza xa umntu othandekayo encike kakhulu kwimidlalo yekhompyutha
I-Eidetic, imemori, ukucinga okufuziselayo
Umncinci umntwana wenqaba ukutya
U-Anastasia Volochkova utshwenyeke kwisenzo sikaOksana Pushkina
UReese Witherspoon wadala i-brand brand
Ikhekhe leshokoledi edibeneyo
Kutheni i-baby yami ivakalelwa intlungu emva kokutshisa?
Ikhekhe le-Curd kunye nama-mandarins
Oko bathethayo ngempilo yezipikili ebantwini
Kukuphi ukutya okunokubaluleka kweenwele kunye nezempilo
Iifatata ezidibene kunye ne-parmesan ushizi
I-Grapefruit Isidlo Sokulahleka Kwemithwalo Yokukhawuleza
I-Horoscope yeSagittarius-amabhinqa ngo-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
Indlela yokucocela ngokusana umntwana